Ahịa gị ọ Iwu akwadoghị? | Martech Zone
Onye ọka iwu David Castor, onye ụlọ ọrụ ọka iwu ọkachamara na mmalite na azụmaahịa SaaS, emaara m ozi na ngwụsị izu na ozi ọma na FTC ebiela na onye mbụ ya nke iwu nkpughe ohuru.
Dịka akụkụ nke atụmatụ a chọrọ (PDF), ụlọ ọrụ PR Reverb Nkwukọrịta na onye nwe ya Tracie Snitker ga-ewepụ ọ bụla nyocha iTunes ndị Edere ndị ọrụ Reverb dere dị ka ndị ahịa nkịtị na ndị gosipụtara igosipụta mmekọrịta dị n'etiti Reverb na ndị ahịa egwuregwu ndị egwuregwu. Nkwekorita ahụ gbochiri Reverb na Snitker ịdebanye nyocha ọzọ na iTunes nke na-eme ka ọ si n'aka ndị na-azụ onwe ha ma ọ bụ nke na-eleghara igosipụta njikọ ọ bụla dị n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa ya, dị ka FTC.
Nke a bụ ezigbo egwu stof. N'ime iri afọ abụọ, ejighi m n'aka na mụ na ya rụọ ọrụ ma ọ bụ maka azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ PR nke na-apụ n'ụzọ iji kwalite ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa ya. Anọgidere m na-akwalite ndị ahịa m oge ọ bụla na ebe ọ bụla m nwere ike - ọ bụghị n'ihi na m chọrọ iduhie ọha mmadụ, kama n'ihi na m kwenyere n'ihe ha rụzuru. M na-agbalị igosipụta omume m oge ọ bụla - mana ejiri m n'aka na echeghị m akara ahụ ọtụtụ.
Nke a nwere ike ịgbanwe ihe niile. Dị ka ụlọ ọrụ gị chọrọ idokwa ikwu azum, njikọ azum, n'ọkwá, wdg… ọ na-egosi na ihe niile ọ nwere ike ịbụ onye omekome omume ma ọ bụrụ na ọ na-emezu n'ime United States na-adịghị igosipụta a njikọ dị n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa.
ga- Ndị ọkwọ ụgbọ ala Nascar nwere ịkpọsa ndị na-akwado ha n'ajụjụ ọ bụla maka na ha na-eyi okpu ma ọ bụ na-a aụ soda. Hà ga-etinye ngosi dị n'okpuru mpempe akwụkwọ mmado ọ bụla?
ga- Kọmitii na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị (PAC) ga-ekwuwapụta na okwu ọ bụla na saịtị ọ bụla na ha bụ akụkụ nke nzukọ nwere mmekọrịta akwụ ụgwọ na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Kedu maka mgbe ha zipụrụ ọtụtụ puku ndị otu ịga nzaghachi ntuli aka n'ịntanetị?
Ọ bụrụ na m kpọtụrụ onye ahịa na a ihe ngosi ma obu ikwu okwu dị ka ihe atụ emetụtaghị mmekọrịta anyị, ọ dị m mkpa igosipụta ugbu a na ha bụ ndị ahịa?
Ihe banyere Fans na ndị na-eso ụzọ dị mkpa? Enweghị m ụzọ igosipụta mmadụ ole na-eso m ma ọ bụ mmadụ ole m na-eso n'ihi na ha bụ ndị ahịa ma ọ bụ m bụ onye ahịa. Ọ bụghị ọnụọgụ ahụ na-emetụta echiche ọha mmadụ ma jiri ya maka ahịa?
M dere a ịde blọgụ akwụkwọ ebe m tinyere ọtụtụ ndị ahịa m na ndị mgbere (gụnyere Ihe nkedo Castor) dị ka ihe atụ n'akwụkwọ. M ga-enweta ntaramahụhụ n'ihi na egosighi m na anyị nwere, ma ọ bụ otu oge, inwe mmekọrịta azụmahịa?
ga- ngwaahịa ozioma na nzukọ dị mkpa iji baajị ma ọ bụ okpu na-ekwu na ha ga-ekwu maka ndị ahịa ha, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha?
Mgbe ụfọdụ lekwasịrị anya ụlọ ọrụ ma dee banyere ha, ma obu gosi onwe m maka ohere iwulite nmekorita nke ahia n ’odinihu. Ugbu a ọ dị m mkpa igosipụta mgbe m na-azụrụ ha kọfị ma ọ bụ na-ekwo ha n'aka na m na-eme ya n'ihi na m nwere olile anya inweta azụmaahịa ha?
ga- celebrity olu-na ngosipụta na mkpọsa ngwa ahịa ugbu a kwesiri ịkwụsị na ha na-agwa gị na ha bụ ndị akwụ ụgwọ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a?
Aghọtara m na iwu na-anwa igbochi ya aghụghọ omume, mana nsogbu a bụ na mmadụ m dum na intaneti, akaụntụ twitter m, ọnọdụ Facebook m, weebụsaịtị m, yana ederede m niile dabere na mmekọrịta mụ na azụmaahịa. Ego ole ụlọ ọrụ m na-akpata dabere n’ahịa ndị ahịa m na-ere. Abụ m onye nkwado kwụrụ ụgwọ maka ha - awa iri abụọ na anọ n'ụbọchị na ụbọchị asaa n'izu. Adịghị m na-agbalị iduhie onye ọ bụla… ma m na-agbalị ka iwelie ikike, mmata, na ozi ọma na nnọchite nke m ahịa. Kedu ndi ozo m ga ekwu maka ya?!
You nwekwara ike tinye akwa ahụ ugbu a ma tufuo igodo ya.
Ma ọ bụ enwere m ike ịkwaga Canada ma gaa n'ihu na-eme ihe m na-eme. E nwere loophole folks… kpalie gị aghụghọ omume offshore.
Tags: na -eme mkpọtụdavid castorngosiftciwu na-akwadoghịọkàiwuiwuahia ahia
Preston Ehrler kwuru
Ọ dị m ka ọ bụla na nghọta ọ bụla, gọọmentị etiti bụ, mgbe na-agba mbọ na-agba mbọ ịgba mbọ na-egwu egwu, na-agbanye azụmahịa dị egwu. Echere m ihe na-esote, na-eme ka mgbasa ozi bụrụ ihe iwu na-akwadoghị n'ozuzu ya?
Ikekwe ha kwesịrị ilekwasị anya na ụlọ ọrụ ndị e wuru site na ala ruo na ndị aghụghọ - dị ka ọrụ ndụmọdụ kredit. Oh, m kwuru m n'olu dara ụda? LOL
Aug 30, 2010 na 12:00 PM
Ọ bụ ihe ọchị ị na-ekwu na, Preston! FTC weputara peeji 200 na iwu ọhụrụ na-achịkwa ọrụ kredit. O nwere ike ọ gaghị abụ ihe jọgburu onwe ya, ebe ọ ga-eme ka ọtụtụ azụmaahịa ndị ahụ pụọ na azụmaahịa. Anyị nwere onye ahịa nke nọ n'akụkụ dị mma nke ụlọ ọrụ ahụ ọ na-akụda mmụọ na ha ga-asọmpi ndị aghụghọ ahụ.
O doro anya na ihe kacha eme bụ na ụlọ ọrụ kaadị kredit na-aga n'ihu na-apụnara ndị ahịa aka ekpe na aka nri… mana Feds na-aga mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ na-achọ idozi ya!
Eji m obi gị niile na-ekwere gị. Nke a abughi na ọ ga - egbochi azụmahịa, ọ ga - eziga azụmahịa ọzọ na mba ofesi ma ebe FTC ga - eru!
Aug 30, 2010 na 6:22 PM
Um, ejighi n'aka etu etu ihe atụ ndị a siri bụrụ atụnyere ha. Nke a na-eme ka ị na-ekwu ihe a kwụrụ gị ụgwọ na-enweghị ihe ọmụma banyere onye ọrụ njedebe na a na-akwụ gị ụgwọ ikwu ihe ahụ ma ọ bụghị echiche gị n'okwu a. Ma n'ezie nke a bụ maka ebe ndị mmadụ na-erite uru site na ịgha ụgha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ legit nwere ndị ọrụ nyocha ma ọ bụ kwuo ihe na ngwaahịa ga-ekpughe eziokwu ahụ kama ịnwa ime ka hà bụ nwata nwoke 13 hụrụ n'anya egwuregwu ma ọ bụ nne hụrụ akwụkwọ n'anya na amazon. Echere m na ịkwụwa aka ọtọ nke onye na-etinye ya bụ n'ezie ihe ọ na-agbadata n'iche ọdịiche.
Nascar - Ekwenyesiri m ike na anyị niile maara na ndị na-akwado ha kwụrụ ụgwọ ka ha nọrọ ebe ahụ, ọ dịghị mkpa ịkọwa ihe doro anya. Ugbu a, ihe ga-atọ ụtọ bụ ime ka ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ ọgwụ na-akwado ịkwado ụgbọala na-adọkpụ na-edepụta mmetụta niile dị na bọọdụ maka mmadụ niile. 🙂
PAC - Nke a bụ ihe ọzọ dị oke mkpa nke kwesiri ka edozi ya mana ọ gaghị ewute ya.
Ndị ahịa na nkwupụta - Echere m na ọtụtụ mmadụ na-eme ma kwesịrị, na-ejighi n'aka ihe kpatara na ị gaghị agbanyeghị n'ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe atụ ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka ihe ịga nke ọma ị nwere na ha ga-ewe gị n'ọrụ. Ma eleghị anya, m na-efu ihe atụ obi ọjọọ ebe mmadụ ga-erite uru na nke a (ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ ahịa ahịa.)
Bụ onye na-akwado ma ọ bụ onye na-eso ụzọ abaghị uru ọ bụla n'ihi ya enwere m obi abụọ na ọ pụtara ihe ọ bụla. Echere m na ị maara onye na-eso m. Ka ị na-ekwu maka iji ọnụ ọgụgụ gị iji kpọsaa etu ị dị mma mgbe ha bụ ọnụ ọgụgụ na-abaghị uru?
Na akwukwo otu, enweghi m copy (ndo) yabụ amaghi m otu i siri kwuo maka ya n'ime akwukwo a, mana o yiri ka isiokwu a ga-eme ka ọ mara na mmekọrịta dị na ya. Ọ ga-abụrịrị na ọ ga-aka doo anya na ha bụ ndị ahịa gị / nke ugbu a, nke doro anya mana echeghị m na onye ọ bụla ga-ele ha anya dị ka onye na-anaghị ele mmadụ anya n'ihu na-enyocha akwụkwọ ahụ ka ha kwuru na ha nyere ya. Ugbu a, m ga-atụ anya na ị ga-ekwu ebe ọzọ gị na ha rụkọrọ ọrụ na saịtị ahụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ha dị ka ihe atụ na akwụkwọ ahụ, ee. Mana nke ahụ bụ iji nye otuto maka ihe ị na-ekwu na gị na ha rụkọ ọrụ (ọzọ amaghị kpọmkwem otu esi eji ya 'kwuo ma ọ bụrụ na m ga-eche na ihe ị mere nwere ike were dị ka ihe na-ezighi ezi.)
Ekwesịrị m kewaa nke a n'ime ihe 2
Ngwaahịa ozioma - EE! ọ bụrụ n ’ị nweta ego n’aka ndị ị na-ekwu maka gị ka ị ga - aka doo anya. Ọ bụrụ na MS nwere ụyọkọ ndị mmadụ na-ekwu okwu na nzukọ gbasara ngwaahịa MS, na-eme ka ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe na-eme ya site n'ịhụnanya nke ngwaahịa ahụ ma na-akwụ ha ka ha mee nke ahụ oke mkpu ga-emegide ya. Ọ bụ ezie na m bụ onye gafere n'ụzọ ọ bụla m na-adabere na ihe ahụ dị ka oge ọ bụla m na-ekwu maka WP, ana m agba mbọ ịsị na m na-anụ ọkụ n'obi maka ngwaahịa a na akwụtụbeghị m ikwu ihe ọ bụla banyere ya ọ bụ ezie na emewo m ego ịkpụzi ihe maka ndị mmadụ.)
Coffeezụ kọfị - Ọzọ echere m na nke a na-alaghachi na nke enyere. Ọ na-esiri mmadụ ike ikwere na ị nweghị ihe ọ bụla ịre ha mgbe ị mere nke ahụ.
Azụmaahịa - Ha emeela nke a site na '' na akaebe akwụ ụgwọ 'mgbe ezigbo mmadụ na-ekwu okwu. Ọzọ, echere m na 'nyere ha na ha bụ na ọ dịghị onye na-ajụ ajụjụ ahụ.
Echere m n’ikpeazụ ya niile na-agbadata n’eziokwu nke ihe a na-ekwu na ebumnuche nke omume a kwuru. N'ọtụtụ ọnọdụ mgbe a na-akpọsa anyị na anyị maara ya na mgbe emere ihe nwere ike ime ka ndị mmadụ ghara ịkọwapụta ya (dị ka itinye mgbasa ozi akwụ ụgwọ na mgbasa ozi akwụkwọ akụkọ nke dị ka isiokwu ma ọ bụ nkwupụta ego.) Ọ bụ mgbe ndị mmadụ chọrọ ịgha ụgha onye ha bụ ma ọ bụ mmekọrịta ha nwere. Echeghị m na omume mgbasa ozi n'eziokwu nwere ihe ọ bụla na-echegbu onwe gị ebe ọ bụ na a ka nwere ọtụtụ ndị na-adịghị mma na ndị ruru unyi iji buru ụzọ bute ụzọ.
Aug 30, 2010 na 7:29 PM
Na-eme ọtụtụ echiche @ripsup, na paragraf ikpeazụ gị na-akwado arụmụka m dum. "Ihe niile na-eme n'eziokwu… na ebumnuche." Agaghị m ekwenye na gị ma ọ dịkarịa ala. Ya mere… biko kọwaa etu FTC ga-esi ghọta ma ọbụghị eziokwu na ihe m bu n'uche.
Aug 30, 2010 na 11:32 PM
Ọfọn FTC ga-ebu ụzọ leba anya na ya ma ọ bụrụ na enwere mkpesa. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị bụ onye ọzọ ma ọ bụ na-ezo na ị nwere ụfọdụ ụdị ego uru site na ịkwu okwu ọma (ma ọ bụ na-adịghị mma na ngwaahịa ndị asọmpi) ekwesịrị ịkọwa ya. Na isiokwu ọ na-ekwu
"Reverb tinyere gọọmentị n'ime mmiri ọkụ site na ebubo na-enye echiche na nyocha ahụ sitere n'aka ndị na-azụ onwe ha ma ghara igosipụta na e goro ya iji kwalite egwuregwu ndị ahụ nakwa na ọ were pasent nke ọ bụla ahịa."
Ekwenyere m na paragraf ikpeazụ gị na ị na-eme ihe n'eziokwu (ọ bụ ihe m maara banyere gị) n'ihi ya, ha agaghị achọta esemokwu na nke ahụ. Ma, ọ bụrụ na ị na-achọ pịịlị ChaCha ụbọchị niile na-ekwu na ị bụ ụfọdụ onwe gị mgbe ị na-akwụ ụgwọ nke ahụ ga-abụ nsogbu. Ndị ọzọ na-ajụ mgbasa ozi ọzọ nwere otu okwu a wee chọta ụzọ iji kwupụta nke a n'ụzọ enwere ike ịgwa onye na-azụ ahịa nsogbu a. Nke a abụghị ihe ọhụụ ma echere m na otu iwu ahụ dị ka ọ dị na mbụ na ihe kpatara m ji were ihe atụ ahụ.
Akụkụ nke akụkụ: Achọrọ m iwu UK na mgbasa ozi nke siri ike karịa nke anyị ma chọọ ka anyị were ụdị ihe ahụ.
A ga-enwe ndị na-ere ahịa na-akwụwaghị aka ọtọ na, n'ihi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, okwu a ga-erute ụmụ okorobịa a. N'agbanyeghị ihe mere 'onye zụrụ ahịa kpachara anya', agbanyeghị? Ọ bụ na anyị enweghị ọrụ onwe onye ọzọ? Otu n'ime nchegbu m na nke a ga-abụ na ọrụ ndị ọzọ 'na-eme ihe n'eziokwu' ga-akwaga n'ụsọ osimiri ka ndị ahịa na ụlọ ọrụ PR na-amanye imechi ọnụ ụzọ ha n'ihi ụjọ nke imebi iwu FTC (nke bụ n'ezie ụkpụrụ nduzi, ọ bụghị iwu). Ọ bụ nnukwu nwanne m enweghị ike ịnagide ya.
PS: Gaa ChaCha! 😉
Tupu mụ amalite ikwu okwu m, ka m kwuo na enweghị m mmekọrịta azụmahịa Douglas Karr, ụlọ ọrụ ya dị iche iche na ụlọ ọrụ azụmahịa, enweghịkwa m mmasị ọ bụla na-akpata ego site na itinye aka na blọgụ ya na nkọwa na-esote nke nwere ike ọ gaghị egosipụta ma ọ bụ ezi mmetụta ya. Ọzọkwa, mmasị azụmahịa ọ bụla nke na-enweta site na ikwu okwu a bụ kpam kpam n'ihi mgbalị ndị na-abụghị nke azụmahịa na ịkwado nkwalite nkwado onwe onye, ​​nke nwere ike ọ gaghị enwe mmetụta ọ bụla dị mkpa.
Ezigbo post, Doug.
Aug 31, 2010 na 3:47 PM
Enwere m nchegbu banyere mkpọda na-amị amị dị ka onye na-esote, Douglas. Mana ka ị na-egosi na njedebe, omume a na-ekwu bụ aghụghọ aghụghọ. Ọ bụghị ihe ngosi, ọ bụ okwu aghụghọ "na-eme ka ndị ahịa nkịtị". Enwere nnukwu ngaji nke ebumnuche ebe a.
Aug 31, 2010 na 4:07 PM
Aghọtara, Ian. Mana ụkpụrụ FTC anaghị ekwu okwu aghụghọ - ha na-ekwu maka ikpughe.
Aug 31, 2010 na 4:22 PM
Echetara m mgbe ihe a mebiri na echere m na ọ bụ ihe doro anya na aghụghọ nke ihe n'oge ahụ, ya mere gara wee lelee ya.
Ihe cnet adighi abanye n'ime ihe ha mere ma buru uzo iwere akuku abuo na ihe ha kwuru (ikekwe n'ihi nhazi.) Echere m na oburu na ichoro ihe nke ozo, o gha adi ihe doro anya. na-aga n'ihu nakwa na ọ bụ ọtụtụ ihe doro anya ịkpụ.
Aug 31, 2010 na 4:25 PM
Nakwa nkwuputa sitere na akụkọ ftc.
“Enweghị ike igosipụta ihe ndị a, n'ihi ọnọdụ nnọchiteanya e mere, bụrịrị, ọ bụkwa omume aghụghọ.”
Sep 1, 2010 na 12: 38 AM
@ripsup Chaị… so… ọbụladị njọ. Nkwenye ahụ bụ na ọ bụrụ na ịnweghị igosipụta = ARE na-aghọ aghụghọ. = -X
Sep 1, 2010 na 12: 46 AM
Mba ọ bụ
“Egosiputala” + “ihe nnọchiteanya ụgha mere” = aghụghọ
Chere belụsọ na ị bụ “SexyHotCheerTeen17” na m na-akparịta ụka na AIM na nke ahụ bụ ihe ị na-echegbu onwe gị maka ị nweta nsogbu. Echere m na ọ bụ ihe dị omimi mgbe isiokwu ahụ gbanwere na ChaCha na mberede. 🙂
Sep 1, 2010 na 2:01 PM
M na-etinye na * na-esote ihe m nwere mmekọ mmekọ na njikọta na azụ m ngosi peeji. Emela
Sep 1, 2010 na 2:08 PM
N'ụzọ dị mwute, nke ahụ agaghị arụ ọrụ Dave. Agbalịrịla m iji nweta usoro ahụ nke ọma na David wee sị na enweghị m ike ịkọwa ya na TOS m… ọ dị mkpa ka ị nwee aha na aha ọ bụla.
Sep 2, 2010 na 8: 39 AM
Douglass, Daalụ maka post ahụ, ọ bụ isiokwu na-atọ ụtọ. Aga m asị na omume ahụ bụ itinye ihe akaebe na-adịghị mma na nkwakọ ngwaahịa gị. N'ihe banyere ndepụta gị na-aga, nke a dị ka ha na-esetịpụ ihe atụ, dịka ihe gọọmentị mere Napster na azụmaahịa nwere nde egwu na sava nkesa n'oge gara aga. Ọ dị ka ị nwere ike ịme ihe atụ oke oke, nke a bụ maka ebumnuche ebumnuche? Aga m eche na naanị ịmeghị ihe ọ bụla na-eduhie ndị ahịa ịzụrụ ngwaahịa ma eleghị anya ị ga-ahụ nke ọma.